Google Appoints A Zimbabwean, James Manyika, As Senior Vice President
The former University of Zimbabwe and University of Oxford graduate serves on the boards of research institutes at Harvard, MIT, Oxford, Stanford, and other high schools.
1980 pasi Rose raingova zanu,zanu,zanu chete.asi hapana akaziva kuti vakomana vane nyota ava.saka ikozvino vaguta havachabi zvirinani varambe varipo pane kupinza vakomana be ccc vanenyota yakakura todzokerazve kumashure vachimboba haa vakomana zvimwe zvinhu msoro ngaushande kwete kurota
We once produced such brilliant minds
Am afraid the education sector is now fading
Kurwadziwa kusingapore ndinokuziva ini.
Bright ndine urombo nemarwadzo a kubata.
Ummmm akadzidza mufesi uyu well done
@jeremy haa ini zve CCC Maya akuna anokwanisa kunditenesa kti ndii sapote akuna CCC 🚮🚮🚮
Haa ini andisapote zvisina basa manje andisi benzi ka ini
#brignht, iwe uchingoshandiswa nezanu to derail change.
Udza mhuri nehama dzako kuti CHAMISA IS UNSTOPPABLE.